Iindidi ezahlukeneyo zoNxibelelwano lwe-Intanethi
Ngaphambi kokuba uqhagamshele kwi-Intanethi okokuqala, kuya kufuneka ubenehardware ethile endaweni kwaye ukhethe eyakho Umboneleli weenkonzo ze-Intanethi (ekwabizwa ngokuba yi ISP okanye ngokulula umboneleli ). I-ISP yinkampani eneekhompyuter ezinikezelweyo (ekuthiwa abancedisi oyisebenzisayo ukufikelela kwi-Intanethi. Ii-ISPs zibiza intlawulo yenyanga ngale nkonzo.
Unokukhetha uhlobo loqhagamshelo ukuze ungene kwi-Intanethi. Uhlobo loqhagamshelo olufunayo luchonga ukuba zeziphi iinkampani onokukhetha kuzo ukubonelela ngenkonzo.
Umzekelo, uqhagamshelo lweDSL lunokuza kwinkampani yakho yefowuni, ngelixa uqhagamshelo lwentambo lufumaneka kwinkampani yeTV yekhebula. Ayizizo zonke iintlobo zonxibelelwano ezifumanekayo kuyo yonke indawo, ke jonga kwifowuni, intambo, kunye nabanikezeli be-Intanethi basekhaya kunabanikezeli belizwe okanye bamazwe aphesheya ukufumana ukhetho kunye neendleko (ezinye zinikezela ngezaphulelo kumalungu e-AARP, umzekelo).
Nazi iindidi zixhaphakileyo zonxibelelwano, nganye inikezela ngokulungileyo kunye nangobunzima ngokomgangatho wesiginali kunye nokuphazamiseka okunokubakho ngokuxhomekeke kwinkampani nakwindawo ohlala kuyo, yenza njalo nomsebenzi wakho wesikolo ngaphambi kokuba usayine kumgca ochaziweyo:
I-cheristin yeempembelelo zeekati
Umgca wobhaliso lwedijithali (DSL): Le nkonzo ihanjiswa ngomnxeba womhlaba wefowuni yakho, kodwa ifowuni yakho iyafumaneka kuwe ukuba wenze iminxeba nokuba uqhagamshele kwi-Intanethi. I-DSL luhlobo lonxibelelwano lwebhendi ebanzi, enokuthi isebenzise imigca yefowuni kunye neentambo ze-fiber-optic ukuhambisa. Kuya kufuneka ubhalise kwinkonzo ye-broadband (jonga kwinkampani yakho yeefowuni) kwaye uhlawule umrhumo wenyanga wofikelelo.
Intambo: Endaweni yoko unokuya kwinkampani yekhebula yendawo ukuze ufumane inkonzo yakho ye-Intanethi ngentambo ezisa inkqubo yakho yeTV endaweni yefowuni yakho. Olu lolunye uhlobo lwenkonzo ye-broadband, kwaye iyakhawuleza. Jonga kwinkampani yekhefu ngentlawulo yenyanga.
Isathelayithi: Ngokukodwa kwimimandla yasemaphandleni, ababoneleli be-intanethi be-intanethi banokuphela kokukhetha kwakho. Oku kufuna ukuba ufake isitya se-satellite. I-DISH kunye neComcast ngababoneleli ababini bonxibelelwano lwesathelayithi ukujonga.
Iindawo ezingenazingcingo: Ukuba uthatha ikhompyuter yelaptop engenazingcingo, ithebhulethi, okanye iselfowuni kunye nawe kuhambo, unokwenza i-piggyback kunxibelelwano lomnye umntu olwenzileyo. Uyakufumana iindawo zokuhlala ezingenazingcingo kwiindawo ezininzi zikawonkewonke, ezinje ngezikhululo zeenqwelo moya, iikofu kunye neehotele. Ukuba ukuluhlu lweendawo ezinobushushu, ikhompyuter yakho ihlala ifumana uqhagamshelo ngokuzenzekelayo, isenza ukuba inkonzo ye-Intanethi ifumaneke simahla okanye ngentlawulo.
Iiselfowuni zonxibelelwano: Ukuba usebenzisa i-smart phone ukuqhagamshela kwi-Intanethi, ungangena kwi-Intanethi ngokusebenzisa inethiwekhi yefowuni yakho ye-3G okanye ye-4G. Ezinye iipilisi zinokudibanisa ngale ndlela, kwaye ungathenga izixhobo zokongeza ezivumela ezinye iikhompyuter ukuba zisebenzise inethiwekhi yefowuni.
Kwaye ukuba ufuna ukufikelela kwi-Wi-Fi kwezinye izixhobo apho kungekho ndawo ingena-wireless, unokukwazi ukwenza indawo engenazingcingo yexeshana usebenzisa ifowuni yakho.
Ngaphandle kokuba unesicwangciso sedatha esingenamda kwiselfowuni yakho, lumka ekusebenziseni inkonzo yakho yeselfowuni ukufikelela kwi-Intanethi kuba unokuhamba ngokulula kumda wesicwangciso sakho sedatha kwaye ube phantsi kwentlawulo eyongezelelweyo.
Chwetheza: Ngonxibelelwano lokucofa, usebenzisa ukucofa imodem ukuqhagamshela kumboneleli wesevisi ye-Intanethi usebenzisa ifowuni yakho yasekhaya. Ngolu hlobo loqhagamshelo, awunakho ukusebenzisa umnxeba wokufowuna xa uqhagamshele kwi-Intanethi. Le yeyona ndlela icothayo yonxibelelwano kwaye yeyona ndlela yokugqibela yabantu.
Unxibelelwano lwe-Intanethi lwahlukile bandwidths (isantya) esixhomekeke ngokuyinxenye kubuchule bekhompyuter yakho kwaye ngokuyinxenye kunxibelelwano olufumana kumboneleli wakho. Isantya esikhawulezayo sikuvumela ukuba uthumele idatha ngokukhawuleza: umzekelo, ukukhuphela ifoto kwikhompyuter yakho. Ukongeza, amaphepha ewebhu kunye nemifanekiso zibonisa ngokukhawuleza. Ngaphambi kokuba ukhethe umboneleli, kubalulekile ukuqonda ukuba isantya sonxibelelwano esikhawulezayo sinokukunceda njani.
Ukudityaniswa kwesantya sokudibanisa kuqhutywa esiphelweni esiphantsi, malunga neekhilobithi ezingama-56 ngomzuzwana, okanye i-Kbps. Unxibelelwano oluninzi lwebhendi ebanzi namhlanje ijikeleze i-500 ukuya kwi-600 Kbps. Ukuba unonxibelelwano olucothayo, ifayile ingathatha imizuzu ukuyilayisha. (Umzekelo, ufaka ifayile oyincamathisela kwi-imeyile.) Lo msebenzi ungathatha imizuzwana kwisantya esiphezulu.
Ibhendi ebanzi (Oko kuthetha ukuba isantya esiphezulu) iinkonzo zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo ezinikezela ngesantya sokufikelela ezahlukeneyo. Ezi zicwangciso zinokukunika ukonga ukuba ucinga ngoqoqosho kwaye ungazikhathazi ngezantya ezisezantsi, okanye zikunike izantya ezingcono kakhulu ukuba ukulungele ukuzihlawula.
Kuxhomekeka kuhlobo lwakho lonxibelelwano, uzakufuna izixhobo ezahlukeneyo zekhompyutha.
Unxibelelwano lwebhendi ebanzi njengentambo okanye iDSL ifuna ukuba imodem ebanzi yenzelwe olo hlobo lwenkonzo kunye nentambo yeTV okanye umnxeba. Umboneleli uya kuhlala ekuqeshisela imodem, ke akufuneki uyithenge.
Ukuba ufuna ukusebenzisa inkonzo yokucofa, uyakufuna imodem yokucofa kunye nomnxeba. Ezinye iikhompyuter zine-modem eyakhelweyo ngaphakathi (ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi imodem yefowuni ); ungazithenga ngokwahlukeneyo.
Ukuba ufuna ukwabelana ngoxhumano lwe-Intanethi kunye neekhompyuter ezininzi ekhayeni lakho, uyakufuna kwakhona umzila (ngaphandle kokuba unemodem ebanzi eneempawu zendlela ezakhelwe kuyo). Ikhompyuter nganye ekhayeni lakho iya kuthi emva koko idityaniswe kwi-router ukuze ifikelele kwi-Intanethi, nokuba kungentambo ye-Ethernet okanye ngaphandle kwentambo.
Ikhompyuter nganye iya kufuna uhlobo oluthile lweadaptha yenethiwekhi. Iikhompyuter ezininzi ziye zakha ngaphakathi kuzo, nokuba zenziwe ngeentambo (zixhaphake kakhulu kwi-PC yedesktop) okanye ngaphandle kwamacingo (okuxhaphake kakhulu kwincwadana yokubhalela, ithebhulethi, okanye ifowuni efanelekileyo). Uhlobo olunentambo lisebenzisa i RJ-45 jack , ikwabizwa ngokuba yi-Ethernet jack, ejongeka njengesinxibelelanisi sefowuni ngaphandle kokuba ibanzi.
Ukuba konke oku kuvakala ngathi sisiGrike kuwe, jonga isikhokelo somsebenzisi wekhompyuter yakho ngolwazi malunga nenethiwekhi, kwaye undwendwele ikhompyuter okanye ivenkile enkulu yokuthenga iofisi kwaye ubuze abameli ngengcebiso yabo malunga nezixhobo zakho ezithile.
Ababoneleli abaninzi banikezela ukuseta simahla okanye kwexabiso eliphantsi xa uvula iakhawunti entsha. Ukuba awuyobuchwephesha ngokwendalo, cinga ukuthatha ithuba koku xa ubhalisa.
Kude kube nini ngaphambi kokuba iTylenol ingene
isetyenziselwa ntoni le naproxen
Uhlaziya njani i-samsung tablet
op 10 iipilisi vs percocet